Ny fiantraikan'ny fifindrana amin'ny ArcMap mankany ArcGIS Pro - Geofumed
Novambra, 2018 ArcGIS-ESRI, Pirinty voalohany
Raha oharina amin'ny dikan-teny ArcMap Legacy, dia fampihetseham-po kokoa sy fampifanarahana ny ArcGIS Pro, manatsara ny fizotry ny processus, ny visualization ary mifandray amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny interface ampiasainy; Afaka misafidy ny foto-kevitra, ny famolavolana baiko, ny fanitarana ianao, ary tsy tokony hiahiahy momba ny fametrahana aloha raha misy vaovao vaovao.
Inona koa no azontsika antenaina amin'ny ArcGIS Pro?
Voalohany, ny fanorenana mifototra amin'ny bango 64, dia ahitana fampiharana toy ny ArcCatalog, ArcGlobe o ArcScene, izay ahafahanao mivezivezy miaraka amin'ny fomba fijery 2D sy 3D, dia afaka mitahiry amin'ny tetikasa tokana ianao.aprx Sarintany maro, layout, tahiry, fitaovana sy style.
Amin'ny ambaratongam-pahombiazana dia afaka manomboka dingana maromaro ianao avy eo, ary ampiasao ny workflows izay hahatonga ny fiainanao ho mora kokoa, na izany aza, avy amin'ny fitaovana 928. ArcMap, Hatramin'ny datin'ny fananganana an'ity lahatsoratra ity dia 723 ihany no hita ao amin'ny Pro. Antenaina fa amin'ny faran'ny taona 2018 dia nampidirina ny fampiasa rehetra, ao anatin'izany ny Parcel Fabric izay antsoina ankehitriny Rakotoan'ny tanys
Ny haavon'ny fihetsika eo amin'ny fomba fijery dia mihamitombo haingana sy mihetsika kokoa, izay fanampiana. Raha miverina isika ary tsarovy ny fomba fiasany ArcMap, tsy maintsy nampiasa bokotra havanana izahay ary nasehon'ireo mari-toetra ireo tahirin-tsarimihetsika, ho sehatra varotra, raster etc. Amin'ny tranga amin'ny ArcGIS Pro, ny fomba toy ny: marika, na ny symbolologie dia tsotra kokoa, noho ny fomba fisainana kofehy o kasety, Izany dia fihetsika feno hatsaram-panahy, ary mifanaraka amin'ny filaminana: fomba izay efa nalain'ireo mpampiasa ny AutoCAD na Microsoft Office.
Ny karazana ArcGIS Pro dia tokony hotadidinao foana:
Mba hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny fampiasana Pro, dia tsy maintsy misoratra amin'ny fikambanana isika, izay ahafahantsika manana fifandraisana akaiky amin'ny mpampiasa. Ny karazana fahazoan-dàlana dia mitovy amin'ny hita ao amin'ny ArcMap, Basic, Standard ary Advanced. Zavatra GIS dia azo ampiasaina na dia amin'ny aterineto, mifandray amin'ny tambajotra ny fikambanana, na dia afaka ihany koa ny miasa izany ivelan'ny aterineto, izany hoe amin'ny alalan'ny disconnecting ny fahazoan-dàlana, na raha tsy manana aterineto koa alalana ny ArcGis Pro, tsy misy zavatra hafa mety hanakana.
Rehefa manomboka ianao dia afaka mahita ny tontolon'ny ArcCatalog, izay ahitanao ny menus izay ampiasana ireo fitaovana ampiasainao. Ao amin'ny sari-tany dia ahitanao ny fomba fijery rehetra anananao ao anatin'ilay tetikasa, ao amin'ny fitaovana na toolboxes ny fiasa izay nampiasaintsika tamin'ny famoronana ny sari-tany dia ho hita, ao fomba ny fisehoan-javatra na ny simbologías dia hita, ny ankamaroan'ny sarintany 3D toy ny 2D, ao angona ny geodatabases noforoninay dia hita, na mampiditra izay ilaina amin'ny tetikasanay.
Ao anatin'ity tontonana ity dia manana ihany koa isika, mpikarakara latabatra, geocoding, fifandraisana amin'ny karazana servetera rehetra sns. Inona no tombony amin'izany? Rehefa manokatra ilay tetikasa .aprx Voatahiry ny rakitra rehetra ianao, ary afaka manokatra ny tetikasanao amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny modely fahazoan-dàlana, olana izay tsy mitranga amin'ny .mxd mijanona ao amin'ny milina iray, ary avy any no trabajarlos.En teny ny marika, dia afaka mahita ny zavatra toy izany koa hita ao amin'ny ArcMap raha tsy iray miavaka dia: mamorona hafanana sarintany, io safidy dia faran'izay haingana, ary tsy mitaky mihazakazaka misy fitaovana mba hiteraka ny angon-drakitra.
Iray amin'ireo zavatra ireo lehibe ianao dia tsy mila manova na manitsy na oviana na oviana ianao isaky ny manova fanovana, izay notakiana tamin'ny famoahana ny Arcmap,
Ao amin'ny tontolon'ny votoaty, izay itodiana ny sarina, dia nanampy grafika vaovao izy ireo tabilao, Hanampy anao izany rehefa mamorona ny famakafakana ilaina, fa, raha mila zavatra hita maso kokoa ianao, toy ny aseho dia azonao ampiasaina ilay fitaovana infografika.
Miankina amin'ny rakitra voafaritra, manokatra kaonty vitsivitsy eo amin'ny tadiny izay ahafahanao mahazo ny safidinao manontolo. Avy amin'ny endriny, fametahana sy asa hafa tahaka ny iray hitantsika amin'ny fanitarana toy ny Xtools Pro.
Izany dia mampiditra fiterahana bebe kokoa sary, Afaka mifandray amin'ny maimaim-poana lohamilina ary mahazo ny sary, na ny mampiasa ny iray fa efa teo aloha sintonina, manana ny safidy ny famoronana lanjany-nanampy entana ao amin'ny tsindry, toy ny ortorectificaciones, teboka rahona, NDVI, hafanana sarintany, naoty sns, ary raha tsy tianao na miasa, dia manangana ny anareo ary hizara azy ireo amin'ny hafa mpampiasa, dia zavatra izay mampiasa Qgis ohatra, any amin'izay hanana manampy-ons (Plugins) na mametraka ny iray namboarin'ny mpiara-miasa iray hafa.
Ho an'ny geologists, geophysicists sy ny mpahay siansa hafa, ArcGis Pro dia mampifandray ankoatra ny Geosoft mba hahafahanao manatanteraka ny dingana toy ny, convertate format .grd ny ESRI hanatanterahana ny famakafakana, manafatra rasters tsy misy angona geografika (georeferencing) avy amin'ny halalin'ny velarana ary alaivo sary an-tsaina izany amin'ny 3D miaraka amin'ny toerana misy azy ireo, apetaho ireo tandindona na paleta miloko namboarina ho an'ny vokatrao, ankoatry ny fiasa hafa izay hanampy anao. Aza adino ny maka azy io, satria maimaim-poana tanteraka izany: https://www.geosoft.com/products/add-in-for-arcgis-pro
Ny zava-baovao amin'ity GIS be pitsiny ity dia ny fampidirana azy amin'ny gis web, mifandray amin'ny ArcGIS Online, izay mamela anao: hamoaka ny sarintany, ny fonosana, ny rafitra na ny modelinao ary ny famerenana ny hafa, mahazo fahazoana fitahirizana angon-drakitra, miditra amin'ny votoatiny hafa, maka download ary mampiasa fampiharana avy amin'ny tranokala sy / na fitaovana finday, ankoatra ny hafa.
Rehefa vita ny tetikasa dia azonao atao ny mamolavola tetikasa Tetikasa fonosana, miaraka amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny fikambanana misy anao, afaka manova azy imbetsaka araka izay ilaina ianao, satria ny daty hanovàna ny fonosana tsirairay dia mifandray ary ny mpiara-miasa dia afaka mandefa ny dikan-ny tetikasa ilainy. Raha tsy azonao antoka ny momba ny fitaovana tsirairay, Apetraho eo amin'ilay bokotra ny cursor ary hampiseho anao ny fototry ny asany.
Ny scripty sy ny fitaovana izay noforonina dia azo ampiasaina amin'ny ArcGIS Pro, miaraka amin'ny sasany ankoatra ny fanovana, satria i Pro dia mampiasa Phyton 3.5 sy Mampiasa ny version 2.7 i ArcMap. Ny fitaovana Phyton dia azo jerena ao amin'ny menio Analysis.
Efa nanamafy ny ESRI fa hisolo toerana ny Pro ArcMap, dia asongadina amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny Pro, satria fantatray ny rafitra ArcMap 32-bit izy io, izay tsy ahafahana mampiditra fanavaozana manan-danja, fa mbola afaka miara-miaina mandritra ny fotoana kelikely ianao, farafaharatsiny hatramin'ny 2022, raha efa zatra izany ianao dia afaka manohy miasa amin'ireo tetikasanao. mxd avy amin'ny ArcMap, .3dd avy amin'ny ArcGlobe, ary .sxd avy amin'i ArcScene ao amin'ny Pro.
Fametrahana ArcGIS Pro
Raha te-hametraka ArcGIS Pro ianao dia tsy maintsy manaraka ireto dingana tsotra ireto:
1. Tsy maintsy mamorona kaonty ao amin'ny ESRI ianao hanomezana alalana ny vokatra aorian'izay, hahita endrika ianao hanombohana ny fitsapana ny kinova andrana anao mandritra ny 21 andro.
2. Midira ao amin'ny kaonty My Esri ary ampiendreho ny fikambananao, zava-dehibe izany, satria rehefa manokatra ny rindranasa ianao dia hiseho ny mailakao sy ny angona mifandraika amin'ny ESRI.
3. Tadiavo ny bokotra handefasana ny kinova fitsapana avy amin'ny My Esri, http://my.esri.com, dia mifanaraka amin'ny Windows 7, 8 ary 8.1. Jereo ny fepetra takian'ny rafitra mba ahafahanao mihazakazaka tsara ao amin'ny solosainao.
4. Rehefa avy mihazakazaka ny installer ianao dia midira ao amin'ny esri.com, mankanesa any amin'ny tabilao fitantanana lisansa ary safidio ny safidy hanamboarana lisansa, alao antoka fa hampavitrika ireo fanitarana ianao ary manondro ASSIGN.
5. Efa voalamina ny fahazoan-dàlana ary azonao atao izao ny mampandeha ilay rindranasa.
6. Hangataka aminao ny mari-pahaizana momba ny ESRI sy ny voila! Afaka mampiasa ArcGIS Pro ianao izao.
Previous Post«Previous Horonam-peo sy horonan-tsary amin'ny Screencast-o-matic sy Audacity.
Next Post Skrill - safidy iray amin'ny Paypalmanaraka »